Shiinaha Warshada Xawaaraha Xawaaraha Badan ee Shiinaha iyo alaableyda | Gelken
Baaxadda arjiga: Xabagta Jelly xoolaha waxaa loo isticmaalaa soo saarida sanduuqa hadiyadaha dhamaadka sare, sanduuqa khamriga, sanduuqa qurxinta, sanduuqa shaaha, galka, buug adag, qaamuus iwm.
Xawaaraha qalajinta ee xabagta xawaaraha sare ee jelly way dhaqso badan tahay waxaana loo adeegsadaa noocyada kala duwan ee mashiinada otomaatiga ah, sida:
Jelly xabagta mashiinka samaynta kiiska otomaatiga ah
Jelly xabagta for mashiinka daboolaya sanduuqa adag adag
Jelly xabagta loogu talagalay mashiinka sameynta daboolka adag ee otomaatiga ah
Sidaan ognahay taas LD Davis waa shirkada caanka ah ee wax keenta xabagta xayawaanka gudaha USA, laakiin Shiinaha, Gelken Gelatin waa mid ka mid ah xirfadleyda Shiinaha qeybiyeyaasha xabagta jelly yaa soo saara xabagta xayawaanka ku saleysan gelatin. Sannadkii 2006, waxaan bilownay inaan dhisno midkeennawarshad xabagta xabagta, kaas oo si toos ah uga baaraandegay xalka gelatin galay xabagta jelly, isla markaana baabi'isa habka soo jireenka ah ee loo dhalaaliyo badeecada dhammeysan ee budada gelatin ka dibna dib loo soo celiyo. Waxay yareysaa qiimaha guud ahaan. Sidaa darteed, waxaanxabagta jelly jumlada oo leh qiime tartan ah.
Xawaaraha xawaaraha degdega ah ee jelly
1.Kalka waxaa lagu dhejiyaa mashiinka otomaatigga ah si loogu dhajiyo sanduuqa adag / buugga adag. Heerkulka qolka ku habboon waa 20 ℃ ~ 25 ℃. Heerkulka xabagta (heerkul aan mishiin ahayn) waa 60 ℃ .Waxaa lagu hagaajiyaa mashiinka.
2.Pre-mel: Ku dheji koollada biyo leh heer kul 75 ℃ dhalaal hore, iyo kudar 10% biyo kulul si ay u noqdaan nuxurka adag ee 55%. Guud ahaan laguma talinayo in la isticmaalo biyo aad u badan si loo yareeyo xabagta, loona xakameeyo heerkulka aan ka badnayn 70 ℃ si looga fogaado dhibaatooyinka lama filaanka ah.
3.Markuu mashiinku muddo dheer hakado, heerkulka waa in la yareeyaa si looga fogaado uumi bax badan ama xaaluf.
4. Ku keydi meel qabow oo qalalan, kana fog biyaha, qoyaanka, heerkulka sare. Heerkulku kama badna 20 ℃. Nolosha shelf waa 1 sano.
Hore: Gelatin Farsamo
Xiga: Dhexdhexaad Xawaaraha Jelly Xabagta